होलीको मज्जा र छालाको सुरक्षाका.. | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← लिबिया सरकारद्धारा युद्धविरामको घोषणा
यस्तो छ फागुले रंगिएको राजधानी →
होलीको मज्जा र छालाको सुरक्षाका..
रंगको उत्सव अथवा होली धूमधामसाथ सेलिब्रेट गर्न पूरा तयारी गर्नुभएकै होला । रंग, अबिर, पिचकारी, मिठाई सबै तयार छ, तर तपाईंको शरीरको छाला यो रंगमा रंगीन तयार होला ? कतै होलीको रंगले तपाईंको छाला पो बिगार्ने हो कि ? त्यसैले रंगको असरबाट छालाको सुरक्षाका लागि केही उपयोगी जानकारी हासिल गर्नु फाइदाजनक नै होला । यदि जमेर होलीको मजा लिन चाहने हो भने रंगको असर छालामा नपरोस् भनेर ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । होलीको दिन बिहान मुख धोइसकेपछि तुरुन्तै अनुहारमा टोनर लगाउनुपर्छ । यसले अनुहारको छालामा हुने स-साना प्वाल वा छिद्र बन्द गरिदिन्छ र अनुहारमा कुनै रंग टिक्न दिँदैन । हात-खुट्टामा सनस्क्रिन एवं अनुहारमा मोस्चराइजर क्रिम लगाउन बिर्सनु हुँदैन । यसले सूर्यको किरणबाट त जोगाउँछ नै, साथै क्रिमको ले यरका कारण छालामा रंगको असर पर्दैन ।
हात तथा खुट्टाको नङमा गाढा रंगको नेलपोलिस लगाउनुपर्छ । यसमा पनि होलीको रंग लाग्दैन ।होली खेल्दा बाक्लो कपडाको फुल स्लिप पहिरन लगाउनुपर्छ, यसले शरीरलाई रंगबाट सुरक्षित राख्छ ।रंगबाट जोगिन हल्का तेल लगाएर मसाज गरी केसलाई बाँध्न सकिन्छ । यसबाट केसमा रंगको असर पर्दैन ।
कसरी छुटाउने रंग ?
रंग बिस्तारै हटाउनुपर्छ । रगडेर रंग हटाउँदा छालामा पीडा हुनसक्छ । अनुहारमा लागेको रंग छुटाउन पहिले वाफ लिनुपर्छ । यसले अनुहारको रोमछिद्र एवं प्वाल खुला हुन्छ र सजिलै रंग हटाउन सकिन्छ ।
बाफ लिइसकेपछि अनुहारलाई क्लिजिङ मिल्कले सफा गर्नुपर्छ । त्यसपछि फेसवास प्रयोग गरेर अनुहार पखाल्नुपर्छ ।फ्रुट बेस फेसप्याक लगाएर पनि रंग हटाउन सकिन्छ । अनुहारमा लागेको हल्का रंग मोस्चराइजबाट पनि छुटाउन सकिन्छ । केसमा लागेको रंग हटाउन कंडिसनरयुक्त माइल्ड स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ ।
होली खेल्न मेटालिक रंग (सिल्भर, गोल्डन आदि) प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यसमा भएको केमिकलले छालालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ ।अनुहारमा लागेको रंग छुटाउन केरोसिन, पेट्रोल वा स्पिरिट प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यसले छालालाई रूखो बनाउँछ ।
आँखाको हिफाजत गरौं
यदि आँखामा रंग वा अबिर पर्‍यो भने तुरुन्त चिसो पानीले धुनुपर्छ ।रंगका कारण आँखा पोल्यो भने एउटा भाँडोमा पानी भरेर त्यसमा आँखा डुबाइसकेपछि सफा कपडाले बिस्तारै पुछ्नुपर्छ ।गुलाफजलको केही थोपा हालेर केही समयका लागि आँखा बन्द गर्न सकिन्छ । सम्भव भए आँखाको माथि तथा तलको भागमा चन्दनको लेप लगाउन सकिन्छ । यसलाई सुक्नुअघि नै धुनुपर्छ ।
रंग छुटाउने घरेलु उपाय
बेसनमा कागती र दूध मिसाएर पेस्ट बनाउने । त्यसलाई छालामा लगाएर १०-१५ मिनेट त्यत्तिकै छाड्ने । त्यसपछि पानीले धुने । मुलाको रस निकालेर त्यसमा दूध, बेसन तथा मैदाको मिश्रण बनाउने । यस्तो मिश्रण लगाएर सफा गर्दा छालामा चमक आउँछ । काँक्राको रसमा थोरै गुलाफजल मिसाएर छालामा लगाउने । यसले रंग निकाल्नुका साथै छालाको रंग पनि निखार्छ । जौको पीठोमा बदामको तेल मिसाएर छालामा प्रयोग गर्दा पनि रंग जान्छ । केशमा रंग भए पहिले राम्रोसँग केश झट्कार्ने । त्यसपछि बेसन तथा दहीले केस पखाल्ने । त्यसपछि स्याम्पु प्रयोग गर्ने ।
होलीको शत्रु नक्कली रंग
होली मोजमस्तीको उत्सव हो । यसले बालबालिका, युवायुवती तथा वृद्धवृद्धामा बेग्लै उत्साह सिर्जना गर्छ । वर्ष दिनमा आउने पर्वलाई खुसी एवं उल्लासका साथ मनाउनैपर्‍यो तर कतिपय व्यक्ति रंगबाट डराएर घरमै लुकेर बस्छन् । हुनसक्छ, स्वास्थ्यका दृष्टिले कतिपय मानिस रंगसँग टाढै रहन चाहन्छन् । हामी जुन रंगले होली खेल्छौं त्यस्तो रंग स्वस्थ्यमैत्री होला त ? कतिपय रंग स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने पनि हुन्छन् ।
कृत्रिम रंग र अबिरबाट स्वस्थ्यमा प्रभाव
प्राकृतिक रंग तथा अबिरलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित मान्न सकिन्छ । जबकि कृत्रिम रंग अबिर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्, तर होलीमा कृत्रिम रंगकै प्रयोग बढी हुन्छ, ’cause यो सुलभ ढंगले प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्ता रंग-अबिरले होली खेल्ने क्रममा हातले छोएर कुनै खानेकुरा खाँदा वा पिउँदा रंगको केही अंश खाइन्छ । यस्ता रंग खानु विष सेवनभन्दा कम घातक हुँदैन ।
अधिकांश व्यक्तिलाई कृत्रिम वा रासायनिक रंगबाट एलर्जीसमेत हुन्छ । कतिपयलाई त गम्भीर प्रकृतिको एलर्जी पनि हुनसक्छ, जसको उपचार निकै जटिल हुन्छ । यसका साथै शरीरमा स-साना फोका उठ्ने, छालमा जलन तथा घाउ त हुन्छ नै, यदि शरीरमा कुनै घाउ छ र त्यसमा रंग पर्‍यो भने निश्चय नै हानि पुग्छ ।
होली खेल्नुपूर्व सावधानी
होली खेल्नुअघि शरीरमा भ्यासलिन वा कोल्डक्रिम राम्रोसँग लगाउने, जसले गर्दा शरीरमा रंगको प्रभाव कम परोस् ।होली खेल्नुअघि शरीरको खुला भागमा सस्र्युंको तेल लगाउने, जसले छालामा रंगको असर पर्न दिँदैन ।होली जुत्ता-मोजा लगाएर खेल्नुपर्छ । यसले खुट्टालाई रंगबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । केशमा तेल लगाउनुपर्छ वा बाँध्नुपर्छ । यसो गर्दा केसमा रंगको असर कम हुन्छ । रंगको सबैभन्दा बढी दुष्प्रभाव आँखामा पर्छ । त्यसैले आँखालाई जोगाउनुपर्छ । यदि कसैले अनुहारमा रंग दल्न खोजे तुरुन्तै आँखा बन्द गर्नुपर्छ ।
होली खेल्न नाइलन, पोलिस्टर वा टेरिकटनको कपडा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । ’cause यस्तो कपडामा रंग बस्दैन र छालामा पनि कम असर हुन्छ ।
कसैले केसमा सुख्खा रंग हालिदियो भने त्यसलाई तुरुन्तै झट्कारेर हटाउनुपर्छ । गीलो रंगलाई पनि तुरुन्तै पुछिदिने हो भने त्यसको असर कम हुन्छ । अबिरलाई पानीले धुनु हुँदैन । सुख्खा कपडाले पुछ्नु राम्रो उपाय हो । यदि टाउकोमा अबिर परेको छ भने त्यसलाई काइँयोले कोरिसकेपछि स्याम्पुले धुनुपर्छ । रंग छुटाउन साबुन नै प्रयोग गर्नु उत्तम हो । रंग छुटाउन कमसल डिटरजेन्टको प्रयोग पनि राम्रो मानिँदैन । ’cause त्यसले छालामा घाउ बनाउन सक्छ । नरिवलको तेलमा कपास डुबाएर बिस्तारै-बिस्तारै रंग हटाउन सकिन्छ । यो निकै राम्रो उपाय हो ।
केसको रंग हटाउँदा त्यो रंग शरीरमा नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । नङमा रंग परेको छ भने त्यसमा कागती प्रयोग गर्न सकिन्छ । रंग छुटाएपछि छालामा पीडा नहोस् भनेर दूध र बेसारको लेप लगाउनु राम्रो हो । रंग छुटाएपछि छालामा हल्का पीडा महसुस भयो भने ग्लिसिरिनमा गुलाफजल मिसाएर प्रभावित ठाउँमा लगाई केही समय राखेर पानीले धुनुपर्छ ।
Posted By : Narayan Nepal Source : Saptahik